अन्तरवार्ता Archives - विवेचना
“दुई वर्षमा घरघरमा बिजुली, प्रत्येक टोलमा बाटो”
झापाको गौरीगञ्ज पश्चिम दक्षिणी झापाको सीमावर्ती गाउँपालिका हो । झापाका आठवटा नगर र सातवटा गाउँपालिकामध्येको जिल्लाकै पुरानामध्येको बजार गौरीगञ्जको पहिचानसँग पनि जोडिएको छ । २०७३ सालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागु गर्दा झापा जिल्लामा साविकको खजुरगाछी, महाभारा, कोरोबारी र गौरीगञ्ज गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर गौरीगञ्ज गाउँपालिका बनाइएको …
ब्याकग्राउन्ड ब्लोर गरी चहकिलो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने मन कसलाई नहोला र ! घुमफिर गर्दा डिएसएलआर क्यामरा भिरेर सुन्दर तस्वीर खिच्दाको रमाइलो अनुभूति नै बेग्लै हुन्छ । त्यसैले आजभोलि डिएसएलआर क्यामराप्रति युवाको क्रेज बढ्दो छ । सौखिन फोटोग्राफरदेखि व्यावसायिक फोटोग्राफरको पहिलो रोजाइमा पर्छ डिएसएलआर क्यामरा । क्यामरा त किन्ने तर यसअघि यसका …
— दिपक दर्शन, मोटिभेसनल स्पीकर हरेक मानिसको खुसी सफलतासँग जोडिएको हुन्छ । तर, सफल व्यक्ति विरल्लै पाइन्छ । असफलता, नैराश्यता र तनावले धेरैलाई ग्रसित पार्छ । अनि खुसी हराउँछ । मान्छेले मुस्कुराउन बिर्सिन्छ । तर, सफलता मात्रै जीवन होइन, सफल बन्ने कोसिस पनि जीवन हो भन्दै झापाली एक युवा मानिसको जीवनमा खुसी फर्काउने अभियानमा छन् । …
‘प्रविधिसहितको‌ व्यावहारिक शिक्षा कर्णालीको‌ मूलमन्त्र’
झापा जिल्लाको‌ सुन्दर स्थान हो‌ बुद्धशान्ति गाउँपालिका । तीनतिरबाट पहाडले‌ घे‌रिएको‌ र बीचमा समथर मै‌दान भएको‌ यस दून क्षे‌त्रमा ने‌पालका प्राय: सबै‌ जिल्ला र सबै‌ जातजातिका मानिसको‌ बसो‌बास रहे‌को‌ छ । अनुकूल वातावरण, सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, खे‌तीयो‌ग्य जमिन, से‌वा सुविधाको‌ पर्याप्तताका कारण यो‌ गाउँपालिका धे‌रै‌ मानिसको‌ गन्तव्य बने‌को‌ …
‘१० डोका मेरा सिकारु लेखहरु फालिए पनि म निराश भइनँ’
— तुलसीदास श्रेष्ठ साहित्यकार/पत्रकार पूर्वी नेपालस्थित इलाम जिल्लाको शान्तिपुर गाउँ विकास समितिमा माता स्वर्गीय जानुकादेवी श्रेष्ठ र पिता स्वर्गीय रामनारायण श्रेष्ठको ज्येष्ठ सुपुत्रको रुपमा विसं १९९५ मंसिर २५ गतेका दिन यस धरातलमा पाइला टेकेका तुलसीदास श्रेष्ठ अग्रज साहित्यकार, सफल शिक्षक तथा पत्रकार हुन् । साहित्यका विभिन्न विधाहरु कथा, कविता, उपन्यास …
‘स्वर्ण महोत्सव काँकरभिट्टा माविको इतिहास बुझ्न नयाँ पिँढीलाई अवसर’
तुलसीप्रसाद निरौला, प्रधानाध्यापक : काँकरभिट्टा मावि झापाको मेचीनगर-६ स्थित काँकरभिट्टा माविले स्थापनाको ५० औं वर्षगाँठको सन्दर्भ पारेर स्वर्ण महोत्सव मनाइरहेको छ । यही माघ २ गते औपचारिक रुपमा महोत्सव उद्घाटन भई आइतबार एक विशेष समारोहका बीच विधिवत समापन हुँदैछ । महोत्सवको पेरिफेरिमा रहेर विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलसीप्रसाद निरौलासँग विवेचनाकर्मी विमर्श उप्रेतीले …
‘कलात्मक विचारको अभिव्यक्ति हो कविता’
वरिष्ठ प्रगतिवादी कवि : प्रथा नेपाली साहित्य सिर्जनाका वरिष्ठ प्रगतिवादी कविका रुपमा परिचित छन् प्रथा । झापा बाह्रदशी-१ मा जन्मिएका उनको हाल धेरै समय काठमाडौँमा बित्छ । एकाउन्टिङमा एमबीए गरेका उनी पेशाले शिक्षक हुन् । कवितामा उत्पीडन, दमन, विभेद र सामन्तवादको विरोध तथा सिमान्तकृत मान्छेहरूको पक्षमा वकालत गर्ने उनी उन्मुक्ति …
‘सुन्दर शरीर र स्वस्थ रहन फिटनेस’
मानिस हरदम फिट रहन चाहन्छ । सुगठित शरीर चाहन्छ । स्वस्थ र फिट शरीरले पर्सनालिटी झल्काउँछ । त्यसैले अहिले सुन्दर ज्यान बनाउन फिटनेस सेन्टर धाउने बढेका छन् । फिटनेस सेन्टर पनि बढ्दै गएका छन् । बिर्तामोडमा ७ महिनाअघि ग्यालेक्सी फिटनेस सुरु भयो । जसको प्रशिक्षकमा शारीरिक सुगठनतर्फ राष्ट्रिय गोल्ड मेडलिस्ट …
‘प्रेम जोडीको २५ दिने सम्बन्धको फरक कथा हो लभ एट २५’
प्रेम अद्भुत अनुभव हो । मानिस सधैँ प्रेमिल जीवन बाँच्न चाहन्छ । यो संसारमा प्रेमभन्दा बढी सायदै अरु कुराको चर्चा होला । त्यसैले त हरेक क्षेत्रमा प्रेमले पहिलो स्थान पाउँछ । साहित्य लेखनमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका अनल गौतमले यही प्रेमलाई समेटेर ‘लभ एट पच्चिस’ उपन्यास बजारमा ल्याएका छन् । …
भे‌नियर‌को‌ भन्सार‌ शुल्क हटाउनुपर्छ
ने‌पाल भे‌नियर‌ उत्पादक संघ कस्तो‌ संघ हो‌ ? ने‌पाल उद्यो‌ग वाणिज्य महासंघमा आधिकारि‌क रुपमा सदस्य भएको‌ वस्तुगत संघ हो‌ । यसले‌ प्लाइ उद्यो‌गका लागि आवश्यक पनेर्‌ कच्चा पदार्थ भे‌नियर‌ पत्ताको‌ उत्पादन गनेर्‌ उद्यो‌गहरुको‌ अधिकार‌ र‌ अन्य नीति निर्माणका लागि कार्य गर्दछ । मुलुकभर‌ र‌हे‌का भे‌नियर‌ उद्यो‌गहरुको‌ पक्षमा संघले‌ काम गदैर्‌ आएको‌ छ । …
August 16, 2017 193,265